एभिन्युज टेलिभिजनरवि लामिछाने पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा फसे ! के भन्छ प्रहरी ? - एभिन्युज टेलिभिजन
रवि लामिछाने पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा फसे ! के भन्छ प्रहरी ?
29 Shrawan 2076 Wednesday 11:07 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा पुडासैनीले आफ्ना दुईजना पूर्वसहकर्मी र एक युवती आफ्ना हत्यारा भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि आफ्नो मोबाइलमा केही भिडियो खिचेको र आफ्नो श्रीमतीलाई समेत भिडियो मार्फत केही सन्देश दिएको बताएको थियो । तर एकाएक पुडासैनीको आत्महत्या अगाडिको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।
अनलाईन समाचार पोर्टल नेपालआजले सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा पुडासैनीले न्युज २४ टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ का प्रस्तोता रवि लामिछाने, सोही टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की नामकी एक युवतीका कारण आफूले आत्महत्या गर्नुपरेको बताएका छन् ।
सोही भिडियोलाई आधार मान्ने हो भने पुडासैनीले भने अनुसार नै रवि लामिछानेलगायतले उनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी केही न केही दबाब दिएकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको बुझ्न सकिन्छ । न्युज २४ का युवराज र दीपकले ‘काम नछोड्’ भन्दै अस्ट्रेलिया जाने केटी मिलाइदिन्छु भनेर अस्मिता कार्की नामकी युवतीलाई फेसबुकमा सम्पर्क गराइदिएको समेत पुडासैनीले भिडियोमा उल्लेख गरेका छन् ।
पुडासैनीले आफूलाई दुरुपयोग गर्न गरिएको योजनाबारे पनि भिडियोमा बोलेका छन् । ‘मैले न्युज २४ छोड्छु भन्दा रवि र दीपक भएर त्यसो नगर बरु डिपेन्डेण्ट भिसामा अष्ट्रेलिया पठाइदिन्छौं भन्दै रालुका गाविस ओखलढुंगाकी अस्मिता कार्कीको पछि लगाए’, उनले भनेका छन्, ‘त्यही केटीलाई मैले बीपी स्मृति हस्पिटल बसुन्धरामा जागिर लगाइदिएँ, पुतलीसडकको कन्सल्ट्यान्सीमा पनि बिहान–बिहान पुर्या इदिएँ । पछि उसले उल्टै खाते भन्दै मैलाई हेप्न थाली, म ऊबाट टाढिँदै गएँ । त्यही क्रममा मैले न्युज २४ टेलिभिजन छाडेँ । त्यसबापत मलाई उहाँहरूले त्यही केटीलाई बलात्कार गरेको भनेर फसाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो । त्यसकारण म अब यस संसारमा यस्तैगरी बाँचिरहन चाहन्नँ ।’
त्यस्तै पुडासैनीले उक्त भिडियोमा रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले पछिल्लो पटक धेरै यातना दिएको समेत बताएका छन् । उनले भिडियोमा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् बालुवा ठेकेदार, सिमेन्टलगायत ठूला कम्पनी र घरानाबाट करोडौं कमाउने गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘रातदिन काम लगाएर मलाई कम मात्रै पैसा दिने । कराउँदा कराउँदा बल्लतल्ल १८ हजार तलब पुर्याकए । थोत्रो मोटरसाइकलको मर्मतमै मासिक ४-५ हजार खर्च हुने, कोठाभाडा, यताउता सबै त्यसैले पुर्‍याउनुपर्ने । प्यारी सम्झना, मैले कसरी सक्नु ! रवि दाइ, मलाई मर्न बाध्य बनाएकोमा तपाईंहरूलाई पाप लाग्छ’, उनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘केही केही दीनदुःखीको उद्धार पनि गर्नुभयो, तर अरुको प्रगति देख्न सक्नुभएन । दुनियाँलाई थर्काउनुभयो, ढिलोचाँडो दुनियाँले तपाईंको असली रुप देख्नेछ । मसँग प्रमाण छ, आज नभए पनि भोलि तपाईंको पापको घडा भरिन्छ । तँ अब फसिस् भन्दै मलाई मर्न बाध्य पारेकोमा त्यो पापले तपाईंलाई पोल्नेछ ।’
त्यस्तै उनले आफ्नो पारिवारिक विषयमा पनि कुरा गरेका छन् । उनले आफ्नो श्रीमतीलाई भनेका छन्, ‘ ‘सम्झना, तिमी भर्खर २२–२३ वर्षकी भयौ, अर्को बिहे गर, मलाई माफ गरिदेऊ ।’
प्रहरी भन्छ अनुसन्धान हुँदैछ
चितवन प्रहरी प्रमुख दानबहादुर मल्लले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा दोषी जोसुकै भएपनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । पत्रकार पुडासैनीको शव भरतपुरस्थित एक होटलमा गत २० गते फेला परेपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले सुरुदेखि नै रवि लामिछानेको नाम आएकाले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
एसपी मल्लले असार २१ देखि नै चितवन प्रहरी यही प्रकरणको अनुसन्धानमा जुटेको बताएका छन् । ‘म यही विषयमा लागि रहेको छु । प्रहरीले उहाँ (रवि लामिछाने) लाई सम्पर्क गरिरहेको छ’, एसपी मल्लले भने, ‘जोसुकै भएपनि कारबाही हुन्छ ।’
यसैबीच पत्रकार पुडासैनीले आरोप लगाएका एक पत्रकार युवराज कँडेलले आफूले कुनै अपराध नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले पुडासैनीले नाम लिएकी युवतीलाई चिनेको तथा भेटेको अस्वीकार गरेका छन् । ‘मेरी आमाको कसम खाएर भन्छु, शालिकले भनेकी युवतीलाई न मैले अहिलेसम्म चिनेको छु, न देखेको छु, न भेटेको छु । न शालिकसँग जोडिदिएको छु । अनि अस्ट्रेलिया पठाइदिने लगायतका यी यावत आरोपहरूमा एउटा पनि गल्ती मबाट भएको रहेछ भने यो देशमा कानुन छ । अनि सबैकुरा देख्ने ईश्वर छ । म मर्न तयार छु । सबैकुरा छानबिन होस् । हामीले कुनै अपराध गरेका छैनौँ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यस्तै पत्रकार रवि लामिछानेले आफूमाथि लगाएका आरोप सुन्दा शालिकरामलाई ठूलो भ्रम परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आरोप लगाउने मरेर गएपनि आरोप खेप्ने म जिउदै छु । मर्नेले लगाएको एउटा मात्रै आरोप प्रमाणित होस्, र हदै सम्मको सजाय होस् । थप जानकारी केही समयमा गराउने छु । सारा आरोप सुन्दा लाग्यो शालिकराम लाई ठूलो भ्रम परेछ’, लामिछानेले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।